DAAWO: Maxaa ka dhalan kara Xil ka qaadista Dhooba-Daareed, Yeyse saameyn ku yeelanaysaa?
GAROOWE(P-TIMES) – Mudanayaasha golaha Wakiilada Puntland ayaa 49 xildhibaan codka kalsoonida kala laabteen gudoomiyihii baarlamaanka CabdiXakiim Maxamed Axmed (Dhooba-Daareed) oo xilkan hayay 10kii bilood ee lasoo dhaafay.
Khilaafkan ayaa ka yimi, markii ay is qabteen gudoomiyaha Madaxweynaha Puntland oo ay isku qabteen arrimaha qaarkood, waxaana khilaafku uu noqday mid aan xal rasmi ah laga gaarin.
Warar hoose oo aan helnay ayaa sheegaya in kala shakiga labada dhinac ka sokow, ay jireen arrimo abuuray oo ay kamid ahaayeen Saaxiibada Madaxweynaha oo si gaar ah uga soo horjeeday.
Dad badan waxay rumeysan yihiin in Dhooba-Daareed uu bedeli doono xildhibaan kale oo ay isku beel kasoo jeedaan, sidaas oo kalena ay dhici doonaan in ay Xukuumadu dadaal galiso sidii loo xalin lahaa tabashada ka dhalatay.
Laakiin caqabadaha waa weyn ee imaan doona, waxaa kamid ah kalsoonida lagu qabi karro baarlamaanka oo hoos u dhacday, gaar ahaana in ay la yimaadaan la xisaabtam Xukuumadeed, maadaama ay dhacday in ay rideen gudoomiye baarlamaan.
Xog kale ayaa sheegaysa in ay jiri karaan arrimo kale oo siyaasaded oo aan si fudud ku dhaafi doonin baarlamaanka iyo Xukuumadda Puntland, balse caqabadaheedu ay socon doonaan.
warkagu cidna wax ugumaylo.